जोर-बिजोरमा ट्राफिक नीति : बिहान केही मोटरसाइकल समात्ने, दिनभर छाड्दिने ! – eKhabarpati
Home/समाचार/जोर-बिजोरमा ट्राफिक नीति : बिहान केही मोटरसाइकल समात्ने, दिनभर छाड्दिने !
१५ मंसिर, काठमाडौं । आजभोलि बबरमहलस्थित कला परिषद् छेउमा हरेक दिन बिहान केही मोटरसाइकल साइड लगाइएको देखिन्छ । पुल्चोक, भद्रकाली र कोटेश्वरमा पनि उस्तै दृश्य देखिन्छ ।
#जोर-बिजोरमा ट्राफिक नीति : बिहान केही
निधन बिल गेट्सका पिताको
५ महिनाका बालकसहित चितवनमा मात्रै थप ४५ जनामा कोरोना पुष्टि
बालबालिका खाली पाना हुन्, जहाँ जे लेख्यो त्यही पहिलो अक्षर बन्छन् : प्रधानमन्त्री ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा यसै वर्ष